Raisibe Ntozakhe of South Africa during the 3rd Womens T20 International match between South Africa and India
Namhlanje i-Cricket South Africa (CSA) imemezele abadlali bama-Momentum Proteas women athole amankontileka ngesikhathi esisuka ku-1 May 2018 kuyela ku-30 April 2019.
u-Raisibe Ntozakhe wase-Gauteng musha kuhla.
“Kuzoba isikhathi esimatasa futhi isikhathi esinenselelo kubadlali bethu besifazane,” kuphawula i-CSA General Manager: Cricket, u-Corrie van Zyl. “Sizobe siphethe i-Bangladesh ngo-May futhi sizohambela e-England nase-West Indies ngaphambi kokuthi siye kwi-ICC Women’s World Cup T20, khona e-West Indies ngo-November, futhi sibhekane ne-Sri Lanka ekhaya.”
“Inhlonipho iqembu lethu elinayo kulandela umsebenzi omuhle njengoba bafika kuma-semi-finals e-ICC Women’s World Cup onyakeni odlulile kubonakala kwisimemo sabo sokuya e-England kubalwe ne-T20 triangular series bedlala ne-England ne-New Zealand.”
“Kubalulekile ukuthi sakhe ngaphezu kwempumelelo yethu njengoba silungiselela i-Women’s World T20 kulonyaka.”
“Ngihalalisela abadlali abathole amankontileka futhi sifuna ukubonga abaxhasi bethu, i-Momentum, ngokuseka iqembu lethu lezwe labesifazane,” esho evala u-Van Zyl.
Ama-Proteas esifazane afuna ukuqeda ngamandla Imvula inqoba umdlalo wesine we-Women’s T20 e-Centurion u-Raj no-Mandhana banqobisa i-India women ngendlela encomekayo i-India inqobe kumdlalo wokuqala we-T20 Ama-Proteas women azimisele ngokubuya Mandhana no-Yadav banqobela i-India women i-ODI series u-Mandhana, u-Goswami no-Pandey babeka i-India ngaphambili ngo-1-0 bedlala ne-Proteas women u-Van Niekerk ulindele ukudlala ekhaya i-CSA imemezela amaqembu ama-Proteas Women’s ODI ne-T20 bedlalela ekhaya ne-India i-CSA ihalalisela u-Van Niekerk no-Khuzwayo ngokuthola ama-SRSA Awards Ama-Proteas esifazane akhela kuhambo lwabo lwendebe yomhlaba